Home / Blog / Fa maninona no tsara tarehy foana ny fandroana an'ny olon-kafa?
2021 / 04 / 12 FisokajianaBlog 3183 0
Betsaka ny olona mijery ny tranony aorian'ny fanavaozana azy, ary avy eo mampitaha izany amin'ny hafa, mahatsapa fa tsara kokoa noho ny hatsaran-tarehiny ny olon-kafa, izany ve no fihetsika ataon'ny "zanaky ny hafa"? Androany dia hijery ny haingon-trano fandroana an'ny hafa isika, tena tsara kokoa noho ny tranony ve izany?
1, ny tany dia namboarina tamin'ny alàlan'ny taila hexagonal, tsara tarehy izy io. Ny rindrina dia taila fotsy mitovy akanjo, mahatonga ny fandroana misokatra sy mamirapiratra kokoa. Sary mihantona, milentika hazo, fitaratra tsara tarehy, jiro amin'ny rindrina, sns., Ny haingon-trano iray manontolo dia mampihetsi-po indrindra ny fandroana.
2, Rindrina misy taila vita amin'ny hazo, ny vokany dia tena manokana ihany koa, mahatonga izao habaka miloko maivana izao, toa hafa. Atsangano ny rindrina amin'ny rindrina, mety hametrahana kojakoja amin'ny fandroana, hitsitsiana ny tany azo ampiharina sy tsara tarehy. Voaravaka volon-bonikazo, feno fomba.
3, malalaka ny toerana fandroana, tsy maninona ny fandaminana, tsy dia ratsy loatra ny fampiharana. Mametraha talantalana vitsivitsy amin'ny rindrina, avy hatrany manàna toerana hametrahana zavatra, ny sobika fitehirizana roa ambany koa tsara oh.
4, Ny taila vita amin'ny hazo, atambatra amin'ny taila volondavenona miaraka amina fitambarana, dia toa miloko tokoa.
5, Feon'ny volondavenona, tsy nahatonga ny olona ho ketraka, fa kosa ho maotina be. Indrindra ireo rindrina milentika, ireo fitaovana ampiasaina, fahatsapana manjavozavo, tena lamaody sy kanto. Sasazy tsy ara-dalàna eny amin'ny fitoeran-drano, ary eo akaikin'ny ravaky ny voninkazo, na aiza na aiza dia afaka aseho ny fomba.
6, Ny rindrina dia misy loko roa, tsy mahakivy sy monotonous, feno firafitra, ary ny tany dia nasiana taila voninkazo, lasa fisongadinana lehibe indrindra.
7, taila mainty hexagonal ny tany, tile fotsy amin'ny rindrina, mainty sy fotsy, ny loko miloko mahazatra
8, Mahasarika maso ny sidina mavokely tsara tarehy sy tsara tarehy. Izay toerana rehetra ao amin'ny trano fidiovana dia voalamina tsara, hamirapiratra manontolo!
9, Mahafinaritra ny fitehirizana!
12, Ny rindrina sy ny gorodona misy taila mitovy, firafitra voajanahary, dia toa ambony. Toeram-pidiovana mihantona rindrina fotsy sy kovetabe fandroana mahafinaritra misy accent fotsy kely eo amin'ny habana volondavenona, tsara kokoa noho izany aza.
Previous :: Ampy ny efitra fandroana iray, maninona no mila trano fandroana roa any Sina ianao? Next: Sarobidy loatra loatra koa ireo trano fandroana ireo, efa hitanao ve izy rehetra?
2021 / 04 / 22 4562